Gudoomiyaha gobolka banaadir oo Barakacyaasha ugu baaqay in ay ka guuraan Xerooyinka ay deganyihiin. |
Gudoomiyaha gobolka banaadir oo Barakacyaasha ugu baaqay in ay ka guuraan Xerooyinka ay deganyihiin.
Gudoomiyaha Gobalka Banaadir ee dowladda Somaliya ayaa waxaa uu sheegay in ay dolwlada wado qorshe ku aadan sidii Barakacyaasha Muqdisho ku sugan loogu rarilahaa Xerooyinka ay hadda Muqdisho ka deganyihiin.
Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo Warbaahinta lahadlay ayaa Sidoo kale waxaa uu sheegay in Maamulka Gobalka Banaadir uusan ogolaan doonin in Barakacyaasha Muqdiso jooga ay ku siinagaadaan gudaha Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Somaliya.
“Waxaad arkeysaa goobaha ay Barakacyaasha ay joogaan in ay tahay meel aan wanaagsaneyn marka loo eego dhanka nadaafadda”ayuu yiri Tarsan oo Wariyaasha la hadlayay.
Sidoo kale waxaa uu ugu baaqay in Barakacyaasha ay ka sii guuraan Xerooyinka ay hadda deganyihiin ,isagoona sheegay in ay dowladda wado qorshe lagu rarayo dad kaas.
Hadalkan ka soo baxay Gudoomiyaha Gobalka Banaadir ayaa waxaa uu noqonayaa mid Sii xanuujinaya dad ka barakacyaasha ah oo iminka latacaalaya Nolol maalmeedkooda,maadaama ay Barakacyaasha yihiin kuwo ka xamaasha Suuqyada waaweyn ee Muqdisho.